Qalab loo qeybiyay Beeralay Tuulooyinka ku teedsan Hargeysa | FooreNews
Home wararka Qalab loo qeybiyay Beeralay Tuulooyinka ku teedsan Hargeysa
Qalab loo qeybiyay Beeralay Tuulooyinka ku teedsan Hargeysa
Hargeysa (Foore)-Wasiirka Wasaarada Beeraha ee Somaliland Prof. Faarax Cilmi Geedoole iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta gudoonsiiyay beeralayda deegaanada Xaraf,Xagal, Xareed iyo Dhaboolaq ee galbeedka Gobolka Maroodi jeex deeq isugu jirta agabka lagaga shaqeeyo wax soo saarka beeraha.
Wasiirka oo ay weheliyaan madax ka tirsan wasaarada beeraha,aqoon yahano, iyo hay’da Concern World Wide oo ay wada shaqayn leeyihiin wasaarada beeraha.
Wasiirka Wasaarada Beeraha ee Somaliland Prof Faarax Cilmi Geedoole oo ka hadlay kulanka gudoonsiinta agabkan lagaga shaqeeyo dhinaca beeraha ayaa ku dheeraaday faa’iidada ku jirta sidii aynu isku filaansho dhinaca wax soo saarka ah u gaadhi lahayn.
Wasiirku wuxuu sheegay in sannadkii hore iyo kii ka horeeyayba uu faraq u dhexeeyay tacab soo saarka dalaga beeraha taas oo kala duwanaanshaahaasi uu ku yimid laba sababood oo kala ah dadaalka shaqo ee ay ku talaabsadeen beeralayda dalku iyo raxmada uu Ilaahay inagu gargaaray oo uu tilmaamay inuu wax soosaarkii ka dhigay mid lagaga badbaado baahidii raashinka ee uu dalka qeybo ka mid ah.
Md, Faarax Geedoole waxa uu mahad celiyay hay’ada Concern World Wide oo uu carabka ku dhuftay inay ka dhabaysay balanqaadkeedii ku wajahnaa ka qayb qaadashada horumarinta beeralayda dalka.
Prof. Faarax Cilmi Geedoole waxa uu kula dardaarmay beeralayda qalabkan la gudoonsiiyay inay u diyaar garoobaan dadaal kii hore ka badan.
Qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta deegaanka deeqdan la gaadhsiiyay ayaa u mahadnaqay Wasaarada Beeraha iyo Hay’ada Concern World Wide oo sannadkii la soo dhaafay gacan weyn ka gaystay tababarada kor loogu qaadayay aqoonta beeralayda isla markaana ka hawl galay sidii loo soo celin lahaa moosaskii beeraha u qabanayay biyaha.
Previous PostKhilaaf ka curtay Guurtidda oo albaabadda u xidhay fadhigii maanta ee Golaha Next PostMadaxweyne Ku xigeenka oo xidhay shir goboleedka Haweenka Geeska oo ka socday Hargeysa